Woyyaaneen Dammaqaa MM godhuuf: Teennee ilaalla moo Dr. Abiyyi akka filatamuuf dhiibbaa goona? - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Woyyaaneen Dammaqaa MM godhuuf: Teennee ilaalla moo Dr. Abiyyi akka filatamuuf dhiibbaa...
Woyyaaneen Dammaqaa MM godhuuf: Teennee ilaalla moo Dr. Abiyyi akka filatamuuf dhiibbaa goona?
Woyyaaneen Dammaqaaa Mokkonnin ministera muummee (MM) Itoophiyaa godhuuf deemti wanti jedhu cimee as bayee jira. Kuni dhugaa wanti hin taaneef tokko hin jiru.
Dammaqaan jijjiirama akka hin finne, biyyattii rakkoo keessaa akka hin baafne, ifa. Woyyaaneen hajaa qabdii? Kan isiin laaltu tapha siyaasaati. Tooftaadha. Balaan guddaan Woyyaanee mudataa jiru, Qeerroon alatti, wolhubannaa Oromoo fi Amaara jiddutti mudhataa dhufeedha. Karaa kamiin rakkoo kana keessaa bayaan yaaddoo isii isa guddaadha. Xiyyeeffannaan Woyyaanee inni ammaa bifa kamiin Oromoo fi Amaarri woliin hojjachuu irraa gara wolitti gaarrifachuutti deebi’a isa jedhu. Kanaaf Dammaqaa Mokkonnin achi kaayuun, yeroo namni hundi MM Oromoo ta’uu qaba jedhu kanatti, tooftaa Woyyaanee kana fiixaan baasuuf bu’aa guddaa qaba. Hundi dantaa isaatiif dursa laata. Yeroo nuti Abiyyi irratti duula fokkataa geggeessinutti, Amaarri Dammaqaa dhiisee MM Abiyyi haa ta’u akka hin jenne ifa.
Dogoggora irraan dogoggora hin hojjannu. Tooftaa akkamiin qabsoo akka geggeessaa jirru haa hubannu. Barbaachisummaan garee Lammaa Magarsaaf yeroo kennuu Oromoo hedduuf ifa ture. Namoonni biraa garuu hin ta’u jedhan. Oromiyaan ganna 27’f weerara Agaazii jala turte. Ta’us garuu, barbaachisummaan Labsii Yeroo Muddamaa fagotti ufirraa eeguu ifa ture. Ammas, namoota tokko tokkotti kuni hin mudhanne. Lammaa haa ta’uu Abiyyi, dhibbaa Oromoon godhuun, ministera muummee ta’uun faaydaa malee kasaara irraa dubbatamu hin qabu. Namoota argaan Abiyyii Ahmad kan Dammaqaa fi Shifarraa Shugguxee caalaa itti ulfaate arguun baay’ee nama raaja. Abiyyiin rukune. Abiyyiin diina jalatti kuffisne. Boru yoo Woyyaaneen Dammaqaa Mokkonnin qabattee as baate shira Amaarri nurratti xaxe jechuuf deemna. Barcuma nuti Abiyyi akka hin qabanneef tattaafannu, hiree nuti itti fayyadamuudhaaf rakkannu sabni biraa kamuu argannaan akka hin dhiisne beekuu qabna.
Maaliif kun ta’e garuu? Waan heddu tilmaamuun ni danda’ama. Dhugaana jiru garuu, hawwii hedduu keennaa ta’us, Lammaan MM ta’uu akka hin dandeenne ifa. Abiyyi hiree san akka hin arganneef olola akka qammanaa ajaayuun gadi bayuun dogoggora qofa osoo hin taane dabnana qabsoo Oromoo irratti hojjatamaa jiruudha. Kan beekaa kana godhu dhabachuu, kan wollalli garanatti isa fide dhaabatee waa hubachuu qaba. Kan jidduu kanatti miidhamaa jiru Oromoo fi qabsoo isaati waan ta’eef.
Dhugaadha, kayyoon qabsoo Oromoo Lammaa fi Abiyyiin MM godhuu miti. Achi taa’uun isaanii qabsoo kanaaf deeggarsa bifa addaddaa ni laata abdii jedhu irra dhaabataniiti kan namoota kana deggaruti jiraniif. Imala woggaa tokkoo keessatti Lammaa fi Abiyyi gufuu qabsoo Oromoo osoo hin taane deeggartoota ta’uun isaanii hujiidhaan mirkanaayeera. Rakkoon adeemsa keesa nu mudates, irra caalattti, hiree fi gurra isaan dhoorgachuuun waan dhufe. Osoo hiree fi gurri gayaan isaaniif laatameera ta’ee waan kanaa wolii hojjachuun isaanii ifa.
Woyyaaneen Oromoon bakka murteessaa kamuu irra akka taa’u hin feetu. Komaand Poostii keessa Oromoon hin jiru. Maaliif Lammaa fi Oromoon biraa akka alatti hanbifame ifa. Carraan Abiyyi MM ta’uu yoo argame afoo dhabachuu mitii MM akka ta’uuf dhiibbaa barbaachisu hunda godhuun nurra hin turree? Hireen Abiyyi MM ta’uu Oromoon muummee ministeraa ta’uu qofa osoo hin taane Komaand Poostii keessas carraa quba seensifachuu nuuf uuma. Jijjiirama bu’uuraa akka hin finne ifa. Garuu, bu’aa qaba. Osoo bu’aa hin qabaanne ta’ee barcuma san irra Oromoon akka hin teenneef Woyyaaneen alatti gadi nu hin ittistu ture. Ammas, ala dhaabachuu, tilmaamaan tooftaa baafachuu irra, nama yoo waa godhuu dadhabes, waan gabaan itti jirtu namatti hasaasu qabaachuun mataan isaa waan salphaa miti. Dogoggorrii tooftaa hanga ammaa uumames kan madde odeeffannoo hanquu irratti hundaayuudhaan tooftaa baasuudha. Gara funduraatti kana hanbisuuf bakka hundaa, guddaa hojjatee xiqqaa, nama keenna qabaachuun murteessaadha.
Amma eessa akka jirru argine. Woldhagayuu dhabuun, seenaa irraa osoo hin taane qabatamatti, gatii nama kaffalchiisus barre. Addaaddummaa xixiqqoo dalghatti haa jennu. Oromoo rakkoo keessaa baasuuf dursa haa laannu. Hiree argamte hundatti haa fayyadamnu. Abiyyi MM akka ta’uuf duula barbaachisu hunda haa goonu. Tan hafte dhawaataan itti guuttanna. Bifa kanaan yoo deemne qofa tabba baana.
Previous articleDogoggorri tooftaa raawwatamaa jiru gatii qaalii akka nu hin kaffalchiisne sodaatama
Next articleOsoo hin dhihin garee Lammaa Magarsaa afaan Komaand Poostiitii buusuu qabna